Iyo Witcher 4: Nyowani Saga Yatove Mubudiriro - Game Point - Bhodhi neMitambo yeVhidhiyo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Kurume 21, 2022 | Vapepeti Sarudzo, nhau, Vhidhiyo mitambo
CD Projekt Red yakazivisa chikamu chitsva muThe Witcher saga. Tichifunga kuti zvakaitika kuMusangano Wevagadziri veMitambo, munhu anogona kutofunga achipesana nemamiriro ezvinhu aya kuti vanhu vane tarenda vari kutsvagwa kuti mutambo uvandudzwe. Izvo hazvina kusimbiswa. Nenzira, hapana inopfuura teki yechikamu chitsva cheThe Witcher akateedzana, asi yatove nazvo zvese.
Chiziviso chakauya sechishamiso uye chakarova sebakatwa remuroyi rine maoko maviri: Cd Projekt Red akaita chivimbiso neThe Witcher 4 kuti saga nyowani yaizotanga. Witcher Geralt anofanira kunge ari nhoroondo angangoita se protagonist. Chimwe chiratidzo cheizvi mufananidzo wetiyi wakaburitswa nevagadziri, unoratidza chikoro chitsva chehuroyi.
New Witcher menduru muchando
Witcher Geralt aive mumwe wemhumhi, kune zvakare nyoka, mabheya, griffins, katsi - uye pamwe chimwe, chikoro chaimbozivikanwa. Zvirinani ndizvo zvinoratidzwa nemufananidzo, izvo zvinoratidza medallion yakarara hafu-yakavanzika muchando. Sezviri pachena, CD Projekt Tsvuku inoda chaizvo kutaura nyaya nyowani neiyo itsva The Witcher saga. Hapana chakasimbiswa kusvika zvino, saka pane zvakawanda zvekufungidzira.
Mushure mezvose: chimiro, nzeve nemhino (unogona kuona ndebvu dzekatsi ipapo?) kurudzira chimwe chisikwa chakafanana nekatsi. Dai taizofembera, pari zvino taigona kubheja parudzi rwechando (ngwe), pamwe zvakare lynx. Chero zvazvingava, mhuka dzakanaka dzaizofamba zvakanaka nechikoro chevaroyi. Icho chokwadi chekuti chiratidzo chiri muchando chenzvimbo dzese hachifanirwe kunge chiri masanga, asi chirevo. Iyo Eurasian lynx, semuenzaniso, yaive nenzvimbo yekugovera yakanyatso mumatunhu ayo aifanirwa kunyatsoenderana neWitcher akateedzana.
Parizvino zvinozivikanwa kuti Iyo Muroyi 4 ichave yakavakirwa pane Unreal 5 injini uye sezviri pachena ichaita kusvetuka kwehunyanzvi. Epic Games muvambi Tim Sweeney akati:
"Epic yakavaka Unreal Injini 5 kugonesa zvikwata kuti zvigadzire nyika dzakavhurika dzakavhurika pamwero usina kumboitika uye pamwero usina kumboitika wekuvimbika. Isu tine rukudzo rwakakura kuva nemukana wekushanda neCD Projekt Red kuti tisundire pamwe chete miganhu yekutaurirana nyaya uye mutambo wemitambo, uye kuedza uku kuchabatsira nharaunda yekuvandudza kwemakore anotevera. "
Saka zvichave pachena kuti uchave mutambo wepasirese wakavhurika zvakare, uye waisazotarisira chimwe chinhu nekuda kwekubudirira kukuru kwevakatangira.
Iyo Witcher 4 ichave nezvei? Izvo hazvina kujeka zvachose. CD Projekt Tsvuku haina kutaura nezve nyaya kana zuva ringangoburitswa rechikamu chitsva cheWitcher. Nekudaro, zvinoita sezviri pachena kuti muroyi Geralt ave nezuva rake semushanyi, zvirinani semunhu mukuru. Iyo menduru nyowani uye chiziviso chakajeka che "saga nyowani" zvinoratidza izvozvo. Parizvino hazvizivikanwe kana uye kusvika papi Geralt achaonekwa mune mumwe mutambo weWitcher.
Chero zvazvingaitika, vateveri havafanire kutarisira kuburitswa kweThe Witcher 4 munguva pfupi: Kunyangwe neCyberpunk 2077, vagadziri vakajekesa kuti dzimwe nguva unofanirwa kumirira kwenguva yakareba mutambo. Kunyangwe kana zuva rekuburitswa richifanira kutaurwa pane imwe nguva munguva pfupi iri kutevera, panogona kunge paine shanduko dzakakosha dzinoda moyo murefu kubva kune vateveri kana zvasvika pakuburitswa chaiko kwechikamu chitsva cheWitcher.
Idi rekuti vagadziri vakaita chiziviso paMusangano Wevagadziri veMitambo yenzvimbo dzese zvinogona kuratidza kuti vari kutsvaga vashandi vechirongwa ichi. Asi izvozvowo pakupedzisira kufungidzira. Kana zvirizvo, unogona kutora izvo sechiratidzo chedanho rekutanga rebudiriro. Mushure mezvose, kubatirana neEpic Mitambo maererano nekushandiswa kweUnreal 5 Injini kunogona kukwenenzvera nzira yekusimudzira padanho rehunyanzvi.
Iyo CD Projekt Tsvuku inozivisa Iyo Muroyi 4 saka kamwe kamwe inouya sechishamiso. Chaizvoizvo hazvishamise: Iyo Witcher nhevedzano ndeimwe yeakanyanya kubudirira vhidhiyo mhando mhando. Iyo trilogy yakatengesa mamirioni emakopi pasi rese uye yakagamuchira kurumbidza kubva kune vateveri nevatsoropodzi zvakafanana. Kune chikamu chekupedzisira, The Witcher 3: Wild Hunt, vagadziri vachiri kuvimba neREDEngine yavo yemukati, iyo maererano neCDPR icharamba ichishandiswa kuCyberpunk 2077 yekuwedzera.
Iyo Witcher 3: Kuvhima Kwemusango [Nintendo Shandura] * 39,99 EUR tenga
Kare Crowdfunding yeGamegenic's Magic deck bhokisi: Yakapfuura zvinotarisirwa
Inotevera Pakupedzisira! Mutambo mutsva weGhostbusters wakaziviswa - kusanganisira turera
Just Dance 2021: kuburitswa kweazvino-gen consoles kunoitika
Mission ISS: Wongororo yemubatanidzwa webhodhi mutambo naMichael Luu